China GRH Guorui Hydraulics, mpitarika ny sehatra mpamokatra habakabaka mpamokatra sy mpamatsy | Guorui
GRH Guorui Hydraulics, mpitarika amin'ny sehatry ny asa an'habakabaka
Ny sehatr'asa momba ny asa an'habakabaka (AWP) dia karazana fitaovana manokana natao sy novokarina mba hanomezana fahafaham-po ny filan'ny fiasan'ny haavo avo. Izy io dia afaka mampiakatra ny mpandraharaha, fitaovana, fitaovana sns ... amin'ny alàlan'ny sehatr'asa mankany amin'ny toerana voatondro ho an'ny fametrahana isan-karazany, ny fikojakojana ny Maintenance ary manome antoka antoka ho an'ireo mpandraharaha. Ny sehatr'asa momba ny habakabaka dia manana rindrambaiko midadasika be dia be, ary manana ny mampiavaka ny haitao vokatra be sy ny sanda avo be. Ny any ambanivohitra dia ahitana indrindra ny fanamboarana, ny fanamboarana sambo, ny fanamboarana fiaramanidina, ny fametrahana ny vy sy ny fikojakojana, ny haingon-trano sy ny fanadiovana, ny injeniera ara-tafika, ny fanodinam-bola sy ny logistics, serivisy seranam-piaramanidina sy gara ary sehatra hafa.
Eo amin'ny tsena iraisam-pirenena, Amerika Avaratra, Eropa Andrefana ary Japon no tena mpamokatra seha-pihariana an'habakabaka. Terex sy JLG any Etazonia, Sky jack any Canada, Haulotte any France, ary Aichi any Japon dia lehibe amin'ny ambaratonga, mitana ny laharana dimy voalohany manerantany. Avo ny fifantohan'ny AWP manerantany, ary ny marika anatiny Dingli sy Xingbang dia mivoatra haingana. Tamin'ny taona 2018, laharana faha-10 manerantany i Dingli, ary faha-19 i Hunan Xingbang Heavy Industry. Tao anatin'ny taona vitsivitsy, Lingong, Xugong, Liugong, Zhonglian ary orinasa maro hafa koa dia nampitombo ny ezaka R&D sy ny fanitarana ny tsena ary ao amin'ny ekipa faharoa amin'ny indostria. Amin'ny ho avy, raha mitohy manitatra ny haavon'ny tsena, orinasam-pamokarana nentim-paharazana maro ihany koa no hidina amin'ity faritra ity. Misy fiovana lehibe eo amin'ny fifaninanana eo amin'ireo marika anatiny ao amin'ny indostria.
Ny fivoaran'ny sehatr'asa an'habakabaka any Shina dia somary tara, ary ny tsena anatiny dia tsy mahafantatra tsara ny indostria. Ny sehatr'asa momba ny habakabaka dia tsy be mpampiasa. Asa an'habakabaka marobe no mbola anjakan'ny scaffolding na soloina forklift. Amin'ny tranga vitsivitsy dia apetraka eo an-tampon'ny crane aza ny sehatra iray. Boaty hahatratrarana ny tanjon'ny asa avo lenta. Tamin'ny taona 2018, ny isan'ny AWP any Shina dia manodidina ny 95.000 unit, izay elanelana lehibe raha ampitahaina amin'ny unit 600,000 any Etazonia ary 300,000 unit any amin'ny firenena eropeana folo.
Hatramin'ny 2013, ny AWP ao an-toerana dia manana tahan'ny fitomboana mitombo isan-taona eo amin'ny 45%, ary mbola ao anatin'ny vanim-potoana fitomboana haingam-pandeha. Na amin'ny resaka fanisana tanteraka, ny fanisana isaky ny capita na ny fidiran'ny vokatra dia entin'ny fiarovana, toekarena ary fahombiazana avo lenta izy io. Amin'ny ho avy, ny tsena AWP ao an-toerana dia manana farafahakeliny 5-10 heny fitomboana amin'ny ho avy.
Amin'ny maha-mpamatsy tsara ny sehatry ny asa an'habakabaka, ny Guorui Hydraulics dia nandray anjara lalina tamin'ity sehatra ity nandritra ny 20 taona mahery. Miaraka amina paompy fitaovana, motera cycloid hydraulic, unitie herinaratra hydraulic, ary valves fanaraha-maso hydraulic, io no hany mpamatsy fiaraha-miasa stratejika an'ny faritra hydraulic Terex any Azia. Ny vokatra feno dia misy mpanamboatra ao an-toerana sy avy any ivelany ireo sehatr'asa iasan'ny habakabaka.
Ny motera hydraulic dia be mpampiasa amin'ny AWP dia ny motera kodiarana ampiasaina hitarika ny kodiarana. Nampanao ampihimamba ny marika vahiny io tamin'ny taona voalohany. Nanolotra talenta avo lenta any an-trano sy any ivelany i Guorui, namolavola tsy miankina ny andian-dahatsoratra GWD, ary namolavola kapila mifono hidina hidina mahazatra. Ary ny paompin-tànana karazana valizy tafiditra, aorian'ny fanamarinana nataon'ny OEM an-trano, dia ampidirina tanteraka amin'ny tsena.